Madaxweynaha Koofur Galbeed oo tilmaamay ciidamada xoogga dalka kuwooda ugu liita – Bandhiga
Madaxweynaha Koofur Galbeed oo tilmaamay ciidamada xoogga dalka kuwooda ugu liita
Madaxweynaha Maamulka Koonfur Galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed Lafta-gareen ayaa waxa uu aad u dhaliilay Saraakiisha iyo Ciidamada Xoogga Dalka Qaybaha 8aad iyo 60aad ee Xoogga Dalka oo inta badan ka howlagal deegaanada Koofur Galbeed.
Madaxweynaha Koonfur Galbeed oo Warbaahinta ka soo muuqday ayaa sheegay in Ciidamada Guutada 8aad iyo 60aad ee Xoogga Dalka ay yihiin kuwa ugu liita, marka loo eeggo Ciidamada Qaranka uu leeyahay.
“Ciidanka Guutada 8aad iyo kuwa 60aad iyo Saraakiishooda waa kuwa ugu liita Ciidamada Qaranka, inay wax taraan iska daaye dhibaatada dadka ay ku hayaan ayaa badan.” Ayuu yiri Madaxweynaha Koonfur Galbeed.
Waxa kaloo uu yiri “Ciidanka guutada 8aad kuligood waxaa ay ka shaqeynayaan qabiil, subaxdii shaqo aan shaqadiisa ahayn ayay ku mashquulsan yihiin oo dhulal ay dad u cabirayaan.”
Hadalka ka soo yeeray Lafta-gareen ayaa waxa uu ku soo beegmayaa, xilli laba toddobaad ka hor dilal ka dhacay Magaalada Baydhabo lagu eedeeyay inay ku lug leeyihiin Ciidanka Xoogga Dalka, kuwooda ka hawlgala Koonfur Galbeed.